Dagaalka Sh/Dhexe oo waji cusub yeeshay | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaalka Sh/Dhexe oo waji cusub yeeshay
Kooxda Al-Shabaab ayaa guulo ka sheegatay dagaalka oo socda mudo maalmo ah, iyadoo khasaaro badan uu jiro.
JOWHAR, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab iyo Ciidamada dowladda ayaa dagaal culus wuxuu ku dhexmarayaa gobolka Shabeellaha Dhexe, oo xuduud la leh Muqdisho.
Dagaalkan oo socda tan iyo horaantii bishan ayaa labada dhinac guul ka kala sheegtay, iyadoo ay jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac iyo shacabka soo gaarey.
Afhayeen u hadlay Ciidanka dowladda ayaa sheegay in howlgalka sifeynta gobolka uu meel fiican maraya, islamarkaana ay qabsadeen degaanno badan, isagoo intaasi ku daray inta dhiman ay soo afjari doonaan mudooyinka soo socda.
Dhanka Al-Shabaab waxay sheegatay guulo, iyadoo ku dhawaaqday inay dib ula wareegtay Warciise iyo Qoordheere oo ku dhaw Raagga-Ceelle, islamarkaana ay ka dagaalamayso hadda tuulooyin hoostaga Mahadaay iyo Jowhar.
Dagaalka gobolka ayaa noqonaya midkii ugu cuslaa oo dalka ka dhaca sanadkan, waxaana ku barakacay boqolaal qoys oo u cararay dhanka Jowhar, kuwaaasoo ku nool xaalad nolol xumo ah, maadaama aysan haysan hoy iyo cunto.
Dowladda Soomaaliya ayaa looga dilay dagaalka Saraakiil iyo askar badan, waxaana lagu soo waramayaa in ay aad u adkaatay in Al-Shabaab laga saaro dhulka keymaha ah, oo mudo ku sugnaayeen, halkaasoo ay ku leedahay Kooxda saldhigyo waaweyn.